ညောင်ဦးတွင် စာသင်ကျောင်းဆောင် မရှိ၍ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ထန်းရွက်မိုး ထရံကာဖြင့် ပည?? - Yangon Media Group
ညောင်ဦး၊ ဇူလိုင် ၁၆
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်ဦးမြို့နယ် အောက်ညဥ့်ကျေးရွာအုပ်စု သဖန်းကုန်းကျေးရွာတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထတွဲဖက်အ ခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း(ခွဲ) မှာ စာသင်ကျောင်းဆောင်မရှိသည့်အတွက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများမှာ ထန်းရွက်မိုးနှင့် ထရံကာ ယာယီကျောင်းဆောင်များဖြင့် ချို့တဲ့စွာ ပညာသင်ကြားနေရပြီး ယခုမိုးတွင်းကာလတွင် အဆင်မပြေမှု များနှင့်ကြုံတွေ့နေရ၍ ကျောင်း ဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်နိုင်ရန် အလှူရှင်များလိုအပ်နေကြောင်း သဖန်းကုန်းကျေးရွာ ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါ သဖန်းကုန်းကျေးရွာ၌ အိမ်ခြေ ၆၃ လုံးခန့်တွင် လူဦး ရေ ၅ဝဝ ခန့်ရှိပြီး ကျေးရွာရှိ ကလေးငယ်များ ပညာသင်ကြားခွင့်ရရန် ညောင်ဦးမြို့နယ် မြို့နယ် ပညာရေးမှူးရုံး၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သူကောင်းတည်ကျေးရွာ ပရဟိတအကျိုးတော်ဆောင်ဆရာတော် ဦးဝိဇယ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ပညာသင်နှစ်တွင် သူကောင်းတည်ကျေးရွာ (အ. ထ.က-ခွဲ)နှင့်တွဲဖက်၍ ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထအခြေခံပညာမူလတန်း ကျောင်းခွဲအား ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
”ဒီကျောင်းမှာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအရေအတွက် KG တန်းကနေ စတုတ္ထတန်းအထိ စုစုပေါင်း ၆၅ ဦးရှိတယ်။ သင်ကြား ရေးအတွက် ဆရာ၊ ဆရာမအင်အားက ကျေးရွာအနေနဲ့ အကုန်အကျခံငှားထားတဲ့ဆရာ၊ ဆရာမသုံးဦးနဲ့ ပရဟိတဆရာတွေအဖြစ် ဦးဇင်းအပါအဝင် သုံးဦးရှိတယ်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထတွဲဖက်မူလတန်း ကျောင်းခွဲဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ကျောင်းဆောင်တွေက ထန်းရွက်မိုး၊ ထရံကာ ယာယီကျောင်းဆောင် တွေသာ ဆောက်လုပ်ပြီး ကလေး တွေကို ပညာသင်ကြားနေရတဲ့အတွက် အခုလိုမိုးတွင်းကာလမှာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူလေးတွေ ပညာသင်ကြားရေးအတွက် အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးတွေ ရာသီမရွေး စိတ်အေးလက်အေး ပညာသင်ကြားသွားနိုင် အောင် ကျောင်းဆောင်သစ်လှူဒါန်းမယ့် အလှူရှင်တွေကို မျှော်လင့်မိပါတယ်”ဟု သဖန်းကုန်း ကျေးရွာကိုယ်ထူကိုယ်ထတွဲဖက် မူလတန်း ကျောင်းခွဲဖြစ်မြောက်ရေး ဦးဆောင်ဆရာတော်ဦးဝိဇယ (ပရဟိတအ ကျိုးတော်ဆောင်)က မိန့်ကြားသည်။ ကျောင်းဆောင်သစ်အတွက် လှူဒါန်းလိုသူ အလှူရှင်များအနေ ဖြင့် ဖုန်း ဝ၉-၂၅ဝ၆၆၄၃ဝ၆ ကို ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်းသိရသည်။